#GIS - QGIS 3 koorso talaabo talaabo ah oo xoq ah - Geofumadas
Koorsada QGIS 3, waxaan ka bilownaa eber, si toos ah ayaan ugu dhaqaaqnaa barta illaa aan ka gaarno heer dhex-dhexaad ah, ugu dambeyntiina shahaado ayaa la siiyaa.
Nidaamyada Macluumaadka Juquraafiga QGIS, waa koorso loogu talagalay gebi ahaanba qaab ficil ah. Waxa kale oo ay isku daraa qaybta ugu yar ee fiisigiska ah ee u oggolaaneysa ardayda inay ku saleeyaan aqoontooda GIS, maadaama aysan ugu talagalin inay barato farsamada gacanta, laakiin waa mid dhameystiran.
Koorsadani waa 100% oo uu diyaariyey abuuraha «Blog-ka franz - GeoGeek», waxaa ku jira layliyo ku tababaran fasal kasta oo u qalma.
Post Previous«Previous #CODE - Koorso Dynamo oo loogu talagalay mashruucyada injineernimada ee BIM
Post Next #CODE - Koorsada Horudhaca BarnaamijkaNext »